Waa maxay calaamadaha muhiimka ah ee keydka Amazon ee aad kugula talin kartid kuwa cusub?
Haddii aad ku cusub tahay suuqa sida aadka u tartamaya oo si daacad ah u hadlaya sida Amazon, waxaad la kulmi doontaa caqabad dhab ah. Waxyaabahaasi waa in aysan ahayn hawl fudud oo dhan si aad ugu guulaysato ganacsigaaga maraakiibta. Looma baahna in la yiraahdo in iibsadaha bilawga ah ay dhab ahaantii heleen fursado yar oo ay ku noolaan karaan Amazon iyaga oo liistadoodii dhowaan soo degtay. Sida badan oo ah tartan raadinta ah ee gooyaha Google, guusha ganacsiga maraakiibta marwalba waxay ka timaadaa xaruntii saxda ahayd ee loogu talagalay keywords keywords bartilmaameedka. Xaqiiqdii, fikradda dhabta ah ee Mashruuca Optimization (SEO) waa wax walba oo ku saabsan mawduuca iyo erayada muhiimka ah. Xasuusnow, content waa boqorka, sax? Laakiin marka la eego ganacsiga macaamiisha ah ee maraakiibta Amazon, qalabka raadraaca rikoodhka loogu talagalay ereyada muhiimka ah ma aha wax raaxo ah oo kaliya siinaya faa'iido gaar ah oo lagaa saaro kuwa ka soo horjeeda suuqa - blue bin inc.
Ma aha oo kaliya oo cusub, laakiin kasta oo iibiyaha weyn ee Amazon ayaa isticmaalaya qalabka raadraaca rikoodhka iyo software cilmi-baaris si joogta ah loo cusbooneysiiyo oo loo sii wado guuritaanka hal tallaabo ka hor tartanka ugu dhow . Wax kasta waxay ubaahan tahay kantarool joogto ah oo joogto ah - oo ka bilowda cilmi-baarista saxda ah ee loo yaqaan 'keyword research key', si loo yareeyo soo-saarka soo saaridda iyo xakamaynta qiimaha Taasina waa sida iibiye laylis ah oo lagugula taliyay in aad sii wadato adoo dooranaya qalabka ugu muhiimsan ee Amazon key tracker, ugu yaraan si aad u hesho meel adag oo bilawga ah. Sidaa daraadeed, halkan waa liis gaaban oo ku saabsan fursadaha ugu sarreeya ee aad u leedahay inaad go'aan qaadato oo ugu dambeyntii sameyso liiska alaabooyinka dhabta ah ee iibiya. Nasiib wanaag waxaa jira wax badan oo sahlan oo weli ah qalab wax ku ool ah oo u qalma in la isku dayayo wax kasta oo kale.
List of Amazon Keyword Ranking Tracker Solutions Soo jeediyey for Beginners
Qalabka muhiimka ah ee Sonar waa qayb ka badan oo ku saabsan raadinta iyo raadinta algorithms si loo ururiyo dhammaan macluumaadka la xiriira isticmaalaa dukaamada dhabta ah ee Amazon . Inkastoo qaar ka mid ah dadka ay yiraahdaan waxa ay ka maqan yihiin fursado aad u sareeya, waa waxqabadka multi-purpose waa dhabta Sonar oo ah xulkii ugu sarreeyay ee doorasho cusub oo cusub, isagoo dhawaan ku soo booday warshad maraakiib ah markii ugu horeysay.
Qalabka Keliya (Keyword Tool) waa ikhtiyaarka labaad ee ugu wanaagsan ee la bilaabi karo iyo helitaanka ereyada muhiimka ah ee liiska alaabtaada - si degdeg ah oo si fudud. Waxaa intaa dheer - iyadoo la sii marayo Pro-Advanced Pro oo loogu talagalay ciyaaryahano xirfad leh, waxaad isku dayi kartaa astaankiisa aasaasiga ah ee loo yaqaan 'kickstart', si loo falanqeeyo falanqayn dhamaystiran oo loo baahan yahay ugu yaraan fahamka aasaasiga ah ee garoonka.
Ereyada Ganacsi ah waa hogaamiyaha rasmiga ah marka ay timaaddo horumarinta ereyo muhiim ah oo dheer-dheer. Xaddidaadda kaliya ayaa ah in qaar ka mid ah iibiyeyaasha soo-baxa ay la kulmi doonaan dhibaatada helitaanka waddankooda ama gobolkooda.
KeywordInspector ayaa noqon doonta go'aan aad u wanaagsan oo aad sameyso haddii aad rabto in liiska alaabta ee Amazon in ay had iyo jeer tartan kula tartamaan, iyada oo la bixinayo khidmadda bil kasta ee qiyaastii 40 doolar ma aha kharash aad u sarreeya oo bilowga ah.
Isticmaalidda cilmi-baarista cilmi-baarista waa magac is-sharaxan. Xasuusnow, si kastaba ha ahaatee, in ay u muuqato in ay ku filan tahay in ay qaadato saacada buuxda ama xitaa wax dheeraad ah raadinta hal eray oo muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, waa xalka dhabta ah ee fulinta si aad u hesho faham qoto dheer oo ku saabsan darajada keyword ee Amazon. Dabcan, haddii aadan adigu udhiibin oo keliya qalabka darajo-saarka ee muhiimka ah.